Maitiro Ekuhwina Kudzoka Vatengi | Martech Zone
Maitiro Ekuhwina Kudzoka Vatengi
Chipiri, Gunyana 8, 2019 Chipiri, Gunyana 8, 2019 Douglas Karr
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvebhizinesi nyowani kana rakamisikidzwa kuve nechokwadi chekuti vanacho mari inowirirana. Kunyangwe uine bhizinesi ripi rauri, kudzosera vatengi inzira yakanaka kwazvo yekumisikidza mari yakagadzikana. Chikamu chechisikigo cheizvi zvakadaro, ndechekuti vatengi vacharasika nekufamba kwenguva kuti vanyarare.
Kugadzirisa kurasikirwa mu churn, bhizinesi rinogona kuita zvinhu zviviri:
Tora vatengi vatsva
Shandisa mazano ku kuhwina vakura.
Kunyange zvese zviri zviviri zvakakosha zvebhizimusi rine hutano, chokwadi chinosara chekuti kuwana vatengi vatsva kunogona kudhura 5x zvimwe pane kutora vakuru. Nekuhwina pamusoro pevatengi vekare, unotoziva kuti vanofarira sevhisi yako kana chigadzirwa, zvakaita tsika dzavo dzekutenga, uye nderipi rebasa ravo ravanonyanya kufarira. Unogona kunongedza kushambadza kwako, nekudaro uchideredza mitengo.
Nekudaro, kudzosera mutengi wekare kuri nyore kutaura pane kuita. Uye pane zano rekuhwina kumashure rakasarudzika kune wese mutengi. Iwe uchafanirwa kuongorora ruzivo iwe rwauinaro pavari, kuunganidza kubuda uye sevhisi ongororo, uye kugadzirisa zano kune wega mutengi. Tarisa uone izvi infographic pazasi neFundera kuti udzidze nzira dzinoshanda kwazvo ku kuhwina vaimbova vatengi.
Tags: kutorakuchengetwa kwevatengikugutsikana kwevatengikubatanidzwa maemailfunderarfm kuongororakuhwinakukunda-kumashure zvinopihwa
Iko Kuona kwe 3D + CPQ Ari Kutyaira Kutengesa
Kickstarting Yako Vhidhiyo Kushambadzira Campaign munzira nhatu